Soosaarayaasha Kuleylka Kuleylka - Warshad & Shirkado Isweydaarsada Heat Shiinaha
Isweydaarsadayaasha Fududeynta Kuleylka Kuleylka ee Xasaasiga ah
Mabaadi'da Shaqeynta ee Isweydaarsadayaasha Kuleylka Kuleylka ee Caqli-galnimada Xasaasiga ah: Laba biibiile oo deris ah oo aluminium ah ayaa sameeya marin loogu talagalay durdurrada hawo nadiif ah ama qiiqa ah. Kulaylku waa la wareejiyaa marka durdurrada hawadu ay si isdaba joog ah u maraan kanaallada, iyo hawo nadiif ah iyo hawo-qaate ayaa gebi ahaanba la kala saarayaa. Astaamaha: Soo-kabashada xasaasiga ah Wadarta kala-soocida hawada cusub & qulqulka durdurrada hawada Qiiqa ka-soo-kabashada kuleylka illaa 80% 2-dhinac oo qaabeynta saxaafadda laba jibbaar laba geesood Gebi ahaanba isku xidhka shaabadaysan. Iska caabinta farqiga cadaadiska kor ...
Isweydaarsiga Kuleylka Isweydaarsiga Saxanka Wareegtada Kahortagga
Mabaadi'da shaqeynta ee Cross Counterflow Sensible Air to Air Plate Heat Exchangers: Laba alwaax aluminium deris ah ayaa sameeya marin loogu talagalay qulqulka hawada cusub ama qiiqa. Kulaylku waa la wareejiyaa marka durdurrada hawada qayb ka mid ah ay si isdaba joog ah u socdaan isla markaana durdurrada hawada qayb ka mid ahi ay ka soo gudbaan kanaallada, iyo hawo nadiif ah iyo hawo-qaate ayaa gebi ahaanba la kala saarayaa. Waxyaabaha ugu muhiimsan: 1. Soo kabashada kuleylka ah ee caqliga badan 2. Kala-guurka guud ee durdurrada hawada cusub & kuwa qiiqa leh 3. Waxtarka soo-kabashada kuleylka illaa 90% 4.2-dhinac oo qaabeeya saxaafadda 5 ....
Isdhaafsiga Kuleylka Kuleylka Kuleylka Kala-baxa ah
Mabaadi'da Shaqeynta ee Holtop Crossflow Plate Fin Wadarta kululeeyeyaasha kululaynta (ER Paper ee udub dhexaadka sarrifka enthalpy) Taarikada fidsan iyo taarikada jiingada ah waxay u sameeyaan wadiiqooyin loogu talagalay qulqulka hawo cusub ama hawo leh. waa laga soo kabtay. Waxyaabaha ugu muhiimsan 1. Ka samaysan warqad ER ah, oo lagu soo bandhigo qoyaan badan oo sarreeya, cidhiidhi hawo wanaagsan, caabbinta ilmada oo aad u fiican, iyo iska caabbinta gabowga. 2. Fikrad qaabaysan ...
Sarriflayaasha Kuleylka Rotary
Astaamaha ugu muhiimsan ee ku-beddelaha kuleylka wareegga: 1. Waxtarka sarreeya ee soo-kabashada kuleylka ah ee macquul ah ama iskuleylka ah. 3. Is-nadiifinta dadaallada waxay dheereeyaan meertada adeegga, iyagoo yareynaya kharashka dayactirka. 4. Qaybta nadiifinta ee laba jibbaaran waxay yareyneysaa ka qaadista hawada ka soo baxda hawada qulqulka hawada. 5. Nolosha-waqtiga-saliidda labeenku uma baahna dayactir isticmaalka caadiga ah. 6. Af-hayeennada gudaha waxaa loo isticmaalaa in lagu farsameeyo mashiinnada rotor-ka si loo xoojiyo giraangirta. 7. ...
Isweydaarsadeyaasha Heat tuuboyinka Heat
Waxyaabaha ugu Muhiimsan ee Isweydaarsadayaasha Heat Pipe Heat 1. Codsashada tuubo qabow oo leh finanka aluminium ee hydrophilic, caabbinta hawada oo hooseysa, biyo isku urursanaya oo yar, ka-hortagga daxalka oo wanaagsan. 2. Mashiinka biraha galvanized, iska caabin fiican u daxalka iyo cimri dherer sare. 3. Qaybta kuleylka kuleylka waxay kala soocdaa isha kuleylka iyo isha qabow, ka dibna dareeraha ku jira gudaha tuubada ma laha kuleyl loogu wareejinayo banaanka. 4. Qaabdhismeedka hawada ee isku dhafan ee gaarka ah, qaybinta hawo-qaadashada oo isku mid ah, taasoo ka dhigaysa is-weydaarsiga kuleylka mid ku filan. 5. Goor kala duwan ...
Sidee buu u shaqeeyaa giraangirta qalajiyaha ah? Gawaarida qalajiyaha qalalan ee fudud waxay ku shaqeysaa mabda'a sixirka, kaas oo ah xayeysiinta ama habka nuugista ee qashin-bixiyuhu si toos ah hawada uga saaro uumiga biyaha. Hawada la qalajinayo waxay dhex martaa giraangirta suuxdinta oo qalajiyaha wuxuu si toos ah hawada uga saaraa uumiga biyaha oo uu hayaa inta uu wareegayo. Maaddaama qallajiye qoyaanku ka gudbo qaybta dib-u-cusbooneysiinta, uumiga biyaha waxaa loo wareejiyaa durdur hawo kulul, oo ah ...